Dowladda Soomaaliya iyo hay’adda lacagta adduunka oo galay heshiis cusub – Kalfadhi
Dowladda Soomaaliya iyo hay’adda lacagta adduunka oo galay heshiis cusub
Dowladda Soomaaliya iyo hay’adda lacagta adduunka ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo muddo 12 bilood ah lagu kormeerayo shaqaalaha dowladda (Staff-Monitored Program -SMP II).
War saxaafadeed ay soo saartay hay’adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in heshiiska uu yimid kadib kulan ka dhacay magaalada Nairobi (7-dii illaa 14-kii May) oo looga dooday wajigii 2aad ee barnaamijka kormeerka shaqaalaha iyada oo lagu heshiiyay wajiga seddexaad ee barnaamijkan.
Koox ka socotay hay’adda IMF-ta oo uu hoggaaminayay Maxamed Alhage ayaa Nairobi kula kulmay madax ka socotay Soomaaliya iyaga oo ka wada hadlay isbadallada xagga dhaqaalaha, horumarka laga sameeyay fulinta isbadallada la doonayay iyada oo la eegayo wajigii 2aad ee barnaamijka SMP II.
Hay’adda lacagta adduunka ayaa qoraalkeeda ku xustay inay taageerayso lacagta cusub ee dowladdu soo daabacayso, waxayna soo dhaweysay horumarka la sameeyay intii lagu guda jiray wajigii 2aad ee barnaamijka kormeerka shaqaalaha .
“ Dowladda federaalka Soomaaliya waxay horumar ka sameynaysaa dhismaha hay’adaha, waxayna hagaajinaysaa dhaqaalaha,” ayuu yiri Maxamed Alhage oo horkacayay kooxdii hay’adda IMF-ta.
Waxaa xusid mudan in wajigii 2aad ee barnaamijka kormeerka shaqaalaha ay ka gudubtay dowladda, waxaase hadda horyaala wajiga 3aad ee barnaamijkan oo socon doono muddo 12 bilood ah laga bilaabo bishan May illaa April 2019-ka.
Shirweynaha dib u eegista dastuurka oo la soo xiray